တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်၌ အခြေခံအဆောက်အဦသစ် တည်ဆောက်ရန် ယွမ် ၅၀ ဘီလီယံကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည် - Xinhua News Agency
ကွေ့ယန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဓိက အကြီးဆုံး အချက်အလက်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရာ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်က လာမည့် သုံးနှစ်တွင် ပြည်နယ်အတွင်း အခြေခံအဆောက်အဦသစ် တည်ဆောက်ရာ၌ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၅၀ ဘီလီယံကျော် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၉ ဘီလီယံ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ယခုနှစ်မှစတင်ကာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ ကာလအတွင်း ယင်းငွေကြေးများကို အချက်အလက်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရေးစင်တာများ တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၅၀၀ မီတာအကျယ်ရှိ ရေဒီယိုတယ်လီစကုတ် ဂြိုဟ်တုဘန်းကြီး အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တံခါးဖွင့်အချက်အလက် စင်္ကြံတစ်ခု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် 5G အခြေစိုက်စခန်းပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်ကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်သော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခုအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်ရှိ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆဲ အကျယ် မီတာ ၅၀၀ ရှိ (FAST) ရေဒီယိုတယ်လီစကုတ် ဂြိုဟ်တုဘန်းကြီးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အကြီးဆုံး အချက်အလက်သိမ်းဆည်းမှု ဘက်စုံစီမံကိန်းဇုံ ထူထောင်ရန် စတင်ခွင့်ပြုချိန်ကတည်းက လုပ်ငန်းတည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်၌ အချက်အလက်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရေး စင်တာပေါင်း ၂၃ ခုထိ ရှိခဲ့သည်။
ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်ရှိ ကွေ့အန်း နယ်မြေသစ်သည် Apple ၊ Huawei နှင့် Tencent ကဲ့သို့သော် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများကို အချက်အလက်စင်တာများ တည်ဆောက်ရန် စွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအနေဖြင့် ယန်ဇီမြစ်ဝှမ်းဒေသ ၊ ကွမ်တုံ-ဟောင်ကောင်-မကာအို မဟာပင်လယ်အော်ဒေသ နှင့် ချန်ဒူး-ချုံချင့် စီးပွားရေးရပ်ဝန်း အတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကွန်ပြူတာအချက်အချာ နှင့် အားထုတ်မှုတစ်ကို ထူထောင်သွားရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ကွေ့အန်း နယ်မြေသစ်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗျူရို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဝမ်ကျု(Wang Zhu) ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။(Xinhua)
GUIYANG, Dec. 1 (Xinhua) — Guizhou Province, China’s major big data hub, announced Tuesday that it would invest more than 50 billion yuan (about 7.9 billion U.S. dollars) in new infrastructure in the next three years.
From this year until 2023, the funds will be used to build data centers and more than 60,000 5G base stations to promote the development of an international open data platform for China’s Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST), according toaplan published by the local government.
There are 23 data centers in Guizhou in operation or under construction since it was approved to build China’s first big data comprehensive pilot zone in 2016.
Gui’an New Area in Guizhou Province has attracted heavyweight enterprises such as Apple, Huawei and Tencent to build data centers.
According to Wang Zhu, the deputy director of the industrial development bureau of Gui’an New Area, the local government will aim to establishacomputing hub and strive to provide high-quality real-time services for the Yangtze River Delta, the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Chengdu-Chongqing economic circle.
Aerial photo taken on March 28, 2021 shows China’s Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) under maintenance in southwest China’s Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)